Izitayile zasehlotyeni: ixesha lokuthatha iibhulukhwe zakho ezimfutshane | IBezzia
Izitayile zasehlotyeni: ixesha lokuthatha iibhulukhwe ezimfutshane ngaphandle kwekhabethe
UMaria vazquez | 07/06/2021 10:00 | Ndinxiba ntoni
Yonke into ibonisa ukuba kule veki sizokwazi ukonwabela ixesha lasehlotyeni, nangona ngokusemthethweni asizukungena kweli xesha lonyaka kude kube li-21 kweyeSilimela ezayo. Ixesha lokususa, ke ngoko iibhulukhwe ezimfutshane okanye ezimfutshane, ukwenza izimbo ezifana nezi sabelana ngazo namhlanje.
Iifutshane ziyi Ingubo ehambelana nehlobo, nangona kukho nabo bazinxibayo ebusika. Ingubo egqibeleleyo ukonwabela ezona suku zishushu zidityaniswe neehempe, iblawuzi okanye ihempe kunye neembadada okanye ihempe. Ngaba uyafuna ukwazi ukuba bayenza njani?
Njengesiqhelo, qho ngoMvulo sisebenzise iiakhawunti zeefashoni ze-instagrammers ekwabelwana ngazo ngolithoba. Izinxibo ezisithoba zasehlotyeni ngesidinisekisi esinye esiqhelekileyo: zonke zibonisa iibhulukhwe ezimfutshane okanye ezimfutshane.
Sinokuzixabisa iindlela ezahlukeneyo ukuba sibhekisa kolu hlobo lweebhulukhwe. Iibhulukhwe ezimfutshane zedenim isezona zithandwa kakhulu xa kufika ihlobo, nangona kunjalo kulo nyaka iibhulukhwe ezimfutshane ezinqeni yenziwe e amalaphu akhanyayo njengelinen. Okona kulungileyo, ngaphandle kwamathandabuzo, ukujongana neyona mihla ishushu.
Ukuba sibhekisa kukhetho olwahlukeneyo lokuzidibanisa, kufuneka sithethe ngeendlela ezimbini. Eyokuqala, yenkuthazo encinci, isimema ukuba siyidibanise nayo Izikipa ezisisiseko okanye iihempe ezimhlophe okanye mnyama kwaye ugqibezele ukujonga ngeembadada ezisicaba okanye izikipa ukuze ufumane intuthuzelo enkulu.
Umkhwa wesibini usikhuthaza ukuba sidibanise iibhulukhwe ezimfutshane kunye Ihempe okanye iiblawuzi eziphefumlelweyo ze-boho. Zingaba zihempe ezinoshicilelo lweentyatyambo kunye / okanye ezineenkcukacha ezinemfashini ezinje ngeeleyisi, iiruffles okanye imikhono ekhukhumeleyo. Ukugqiba ukujonga kwakho, uyakufuna kuphela iimbadada ezisezantsi okanye eziphakathi, ezo uziva ukhululeke kuzo, kunye nezixhobo zeraffia.
Ngaba uhlala unxiba iibhulukhwe ezimfutshane ehlotyeni? Okanye ukhetha ukunxiba izikethi okanye iilokhwe xa ufuna ukufutshane?
Imifanekiso - @wheelse, @yeyo_ye, @iamfanlalisa, @tsangtastic, @iqosweb, @lungelo_lukalo, @lionseb, @iamfanlalisa
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » fashion » Ndinxiba ntoni » Izitayile zasehlotyeni: ixesha lokuthatha iibhulukhwe ezimfutshane ngaphandle kwekhabethe
Ulawula njani unxunguphalo malunga nokutya
Uyenza njani ibhalsam yomlomo